Ihe ịchọ mma: Ihe ụlọ na ngwaahịa ejiri chọọ ụlọ na osisi dị iche iche mma iji meziwanye ọrụ na ịma mma ha, na ichekwa nkwụsi ike na ịdịte aka nke ihe owuwu ahụ n'okpuru ihe dị iche iche gburugburu. A makwaara dị ka ịchọ mma ...
Ọdịiche dị n'etiti mkpuchi mkpuchi aluminom na panel ngwakọta aluminom
Ọdịiche dị n'etiti mkpuchi mkpuchi aluminom na ogwe ihe mejupụtara aluminom bụ nke ekewara n'ime akụkụ atọ ndị a: nkọwa dị iche iche, ọkwa ngwa dị iche iche na njirimara dị iche iche. Nkọwa dị iche iche (1) mkpuchi aluminom na -ezo aka na ụlọ d ...
Nhazi ọkwa nke aluminum-plastic panels
Enwere ọtụtụ ụdị nke aluminom-plastik, na ọ bụ ụdị ihe ọhụrụ, nke a na-ekekarị dịka ojiji ya si dị, ọrụ ngwaahịa yana mmetụta ịchọ mma n'elu. 1. Ekepụtara ya site na ebumnuche a. Ogwe aluminom-plastik maka iwu mgbidi ákwà mgbochi Min ...